နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက် တင်သွင်းခွင့် ရာစုနှစ်ဝက်ကျော် ပိတ်ထားဆဲတိုင်းပြည်
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် အစိုးရအဆက်ဆက်က နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက် တင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်လာခဲ့တာဟာ မှောင်ခိုဈေးကွက်ကိုသာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။
အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အကြား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုများရှိဟု ဦးဇော်ဌေး ပြောကြား
သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေ မပြုလုပ်ပေမယ့် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်တို့အကြား ကိစ္စရပ်အလိုက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိတယ်လို့ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။
မဲခေါင်-ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ
မဲခေါင်-ဂျပန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေး၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ယနေ့ ထွက်ခွာသွားသည်။
ကုလက စိုးရိမ်နေသော်လည်း အိန္ဒိယက ရိုဟင်ဂျာများကို နှင်ထုတ်ပြီး မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ပို့မည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားသော ရိုဟင်ဂျာ ခုနှစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှင်ထုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့က အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားသည်။
Episode 49 – ကွယ်လွန်သူတွေအတွက် နေရာ (ကချင်ဘာသာ)
Ngwipyaw ai nhtoi rai u ga. Doh Athan Podcast lamang kaw na kabu gara shakram dat ga ai. ngai gaw Esther re.
Episode 49 – ကွယ်လွန်သူတွေအတွက် နေရာ (မြန်မာဘာသာ)
တပ်မတော်နဲ့ ကေအိုင်အေတို့အကြား ၁၇ နှစ်ကြာ အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေး ကျိုးပေါက်သွားပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက ကချင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် အိုးအိမ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် တစ်သိန်းကျော် ရှိနေပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအကျပ်အတည်းအတွက် စစ်တပ်အား တာဝန်ယူခိုင်းရန် မြန်မာကို အရှေ့တောင်အာရှ တိုက်တွန်း
တရားမျှတမှုအတွက် ဒေသတွင်းမှ ရှားရှားပါးပါးတောင်းဆိုမှုအဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ မြန်မာ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက ရိုဟင်ဂျာအကျပ်အတည်းအတွက် တာဝန်ရှိသူကို တာဝန်ယူခိုင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံကို အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ကျော်ရဲလင်း တရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာအပါအဝင် သဘောတူညီချက်ပါ အချက်တွေကို ဇေကမ္ဘာက ချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ တန် ဘက်စုံ စီမံကိန်းအတွက် မြေငှားရမ်းထားတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ပယ်ဖျက်မယ်လို့ တပ်မတော်က ပြောကြားပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးခင်ရွှေပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီက ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်က တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာ တည်ရှိပြီး.